China Ụdị C FIBC nnukwu akpa nwere conductive yarn ụwa na -ejikọ ndị nrụpụta na ndị na -eweta ya Wode
nke a maara dị ka FIBC na-eduzi ma ọ bụ FIBC nwere ike ime ala, sitere na polypropylene na-anaghị arụ ọrụ jikọtara ya na yarn na-eduzi, na-adịkarị n'usoro grid. A ga -ejikọ yarn ndị na -eduzi ọkụ eletrik ma jikọta ya na ebe njikọta ala ma ọ bụ ihe njikọta ụwa n'oge arụ ọrụ na -arụ ọrụ.
Akpa C FIBC akpa a maara dị ka FIBC na-eduzi ma ọ bụ FIBC nwere ike ime ala, sitere na polypropylene na-anaghị arụ ọrụ jikọtara ya na yarn na-eduzi, na-adịkarị n'usoro grid. A ga -ejikọ eriri ndị na -eduzi ọkụ eletrik ma jikọọ ya na ebe njikọta ala ma ọ bụ ihe njikọta ụwa n'oge arụ ọrụ na -arụ ọrụ.
Nkọwapụta nke ụdị C FIBCs
• Akwa ahụ: 140gsm ruo 240gsm nwere polypropylene na -amaghị nwoke dị 100% ma na -eduzi yarn jikọtara ọnụ
• Ọ na-abụkarị U-panel ma ọ bụ ụdị panel 4
• Elu na -ejuputa na spout top
• Mgbapụta nke ala na -esi na okpuru ala ma ọ bụ ala dị larịị
• Ihe mkpuchi PE n'ime karama dị ka IEC 61340-4-4 si dị
Kedu ihe kpatara ịhọrọ WODE mbukota ụdị C FIBCs
Nkwakọ ngwaahịa WODE na -etinye onwe ya dịka onye ndu nkwakọ ngwaahịa na onye nrụpụta ihe. Sistemụ njikwa njikwa siri ike na imepụta ihe dị mma na -ahụ na ịdị mma oge niile. Ụdị C FIBC nke ngwugwu WODE mepụtara bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi ka ejiri ya na nnukwu ibu dị ize ndụ.
Osote: Pịnye akpa D FIBC nwere akwa disistatic disistatic
Nke gara aga: Pịnye akpa B FIBC nnukwu akpa nwere ihe mgbochi antistatic
Ụdị D FIBC nnukwu akpa nwere antistatic dissipati ...
Akpa Jumbo Fibc, Pp akpa Fibc, Nnukwu akpa Fibc, Nkwakọ ngwaahịa Fibc, Ụdị akpa Fibc, Akụ Fibc Akụkụ,